China API610 ANSI Chemical Process Standard Petrochemical Heavy Crude Fuel Oiri Kutamisa Pump Pump fekitori uye vagadziri | Tongke
API610 ANSI Chemical Maitiro Akajairwa Petrochemical Heavy Crude Fuel Oiri Kutamisa Pump
Muenzaniso Nha .: ZA
ZA dzakateedzana kugadzira pombi dzakatwasuka, singe danho, kumashure dhonza-kunze dhizaini, ivo vanosangana yegumi vhezheni ye ANSI / API610-2004.
Yekutamisa yakachena uye diki yakasvibiswa, yakadzika uye yakanyanya tembiricha, kemikari isina kwayakarerekera uye inoparadza mvura.
ZAO nhepfenyuro ine radial split casing, uye OH1 mhando dzeAPI610 mapombi, ZAE uye ZAF marudzi eOH2 emapombi eAPI610. Yakakwira generalization degree Hydraulic zvikamu uye mabheyari akafanana neA ZA ZAE akateedzana; Impeller yakavhurika kana semi-yakavhurika mhando, inowirirana nemberi uye kumashure yekupfeka isingagadzike ndiro.
Inoshanda pakuendesa zvakasiyana siyana zvinwiwa zvine solid, slag oars, viscous fluid nezvimwewo.
Shaft ine shaft sleeve, yakasarudzika zvachose kune iyo mvura, kudzivirira ngura ye shaft, inovandudza hupenyu hwepombi yakaiswa. Mota ine yakawedzera diaphragm yekubatanidza, nyore uye smart kugadziridza, pasina kutora parutivi pombi nemota.
Kunyanya shandisa ye:
Refinery, peturu-kemikari indasitiri, marasha kugadzira uye yakaderera tembiricha mainjiniya
Chemical indasitiri, kugadzira mapepa, pulp, shuga uye zvakadai seyakajairika kugadzira indasitiri
Mvura yegungwa desalination
Yekubatsira system yemagetsi chiteshi
Zvakatipoteredza kuchengetedza mainjiniya
Ngarava uye offshore engineering
Pashure: MS Electrical Yakakwira Pressure multistage yakachena mvura centrifugal pombi
Zvadaro: Dhiziri Injini Yakareba Shaft Vertical Turbine Moto Pump
Mhando iyi iAPI610 OH1, OH2 mhando mapombi zvichienderana nekumanikidza.
Dhayamita DN 32-400mm
Kukwanisa kusvika 2600 m3 / h
Musoro kusvika 300m
Liquid Kupisa -80 ~ 170 ºC
Kushanda kumanikidza ~ 2.5 MPa (Ruzivo runenge rwuri kureva kudhirowa PT, zvinoenderana netembiricha dzakasiyana kusarudza zvakanaka zvigadzirwa)
Yekutamisa yakachena uye diki yakasvibiswa, yakadzika uye yakanyanya tembiricha, kemikari isina kwayakarerekera uye inoparadza mvura. Refinery, petro-kemikari indasitiri, marasha kugadzira uye pasi tembiricha mainjiniya.
Chemical indasitiri, kugadzira mapepa, pulp, shuga uye zvakadai seyakajairika kugadzira indasitiri;
Mvura yekudyara uye gungwa remvura yegungwa;
Kupisa kwekupisa uye mweya-kutonhodza system;
Yekubatsira system yemagetsi chiteshi;
Zvakatipoteredza kuchengetedza mainjiniya;
Ngarava uye offshore engineering.